ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ - Khit Lunge
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ
ယနေ့ခေတ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေဟာ ဘယ်ကလာလဲ ဘာအတွက်သလုံးလဲ ဘယ်တုန်းကတည်ရှိခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့သေချာမသိနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့ ။အခု ဟိုးတုန်းကလူတွေသုံးခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ။
Qumran မှာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲံ နှစ် ၂၀၀၀ လောက်က ရေးသားခဲ့တဲ့ Dead Sea Scrolls စာလိပ်တွေနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ဒီကြေးနီလိပ်ဟာ ရွေနဲ့ ငွေတွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ရတနာသိုက်မြေပုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။နယ်ခံတွေ ရောမတွေလက်ထဲမအပ်ပဲ သိမ်းထားတဲ့ရွေငွေရတနာတွေကို မှတ်ထားတဲ့နေရာလို့ လေ့လာသူတွေကယူဆထားကြတယ်။သင်ကြည့်ချင်ရင်တော့ Amman က ဂျော်ဒန်ပြတိုက်မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။
၂. Grauballe Man
၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာ ဥရောပအနောက်ပိုင်းကလယ်သမားတွေ ဒါတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ အဲ့လောက်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး။လူတစ်ယောက်က ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်းသေဆုံးခဲ့တာဆိုပေမယ့် အက်ဆစ်ဓါတ်မြင့်မားမှု ၊ အပူချိန်လျော့ပါးမှု နဲ့ အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးမှုတွေကြောင့်အလောင်းတွေဟာ ကျောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီ Grauballe Man ရဲ့ပုံပြင်ကတော့သိပ်မလှပါဘူး။သူဟာ စတေးခံလိုက်ရတာမျိုးဟုတ်ရင်ဟုတ်..မဟုတ်ရင်တော့ သူလုပ်မိတဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့် သူ့လည်မျိုကိုသူလှီးပြီးသတ်သေတာပဲ။
Grauballe Manကိုမြင်ချင်ရင်တော့ ဒိန်းမတ်က Moesgaard ပြတိုက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၃. Dighton Rock
အလေးချိန် တန် ၄၀ လောက်ရှိတဲ့ ဒီကျောက်တုံးကြီးကိုတော့ ၁၆၉၀ ပြည့်နှစ်က ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။Berkley က Taunton မြစ်ဘေးမှာရှိပြီးတော့ အတော်ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတွေ ကျောက်တုံးပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ဒီအမှတ်သားတွေဟာ ဘယ်အမှတ်အသားမျိုးနဲ့မတူတဲ့အတွက် ဘယ်လိုလူတွေက ဒါတွေကိုရေးခြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာကိုတွေးယူလို့မရကြဘူးဖြစ်နေတယ်။သီအိုရီအရတော့ ဒီအမှတ်အသားတွေဟာ အဲ့ဒီနယ်မြေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ Norse တွေနဲ့ ဗိုက်ကင်းတွေဆီကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားကြတယ်။
၄. Hagar Qim
ဒီအဆောက်အဦးကြီးကတော့ သမိုင်းပညာရှင်တွေကို ဦးနှောက်ဖောက်စားတဲ့အရာပဲ။Hager Qim ဟာ ရှေးအကျဆုံးအီဂျစ်ပိရမစ်တွေနဲ့ Stonehenge ထက်ပါရှေးကျလွန်းနေတယ်။ဘီစီ ၃၆၀၀ ကနေ ၃၂၀၀ အတွင်းမှတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆထားရပြီးတော့ ၁၉ ရာစုအတွင်းမှာ Malta မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Hagar Qim ဟာကမ္ဘာပေါ်ကရှေးအကျဆုံးအဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ယူနက်စကို အမွေအနှစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။
၅. လူ့ဘီလူး ခြေရာကြီး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၂၀၀ လောက်က ခြေရာကြီးတစ်ခုကိုတော့ တောင်အာဖရိကမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့ဘီလူးကြီးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သက်သေလို့ပြောနေကြသလို တစ်ချို့ကလည် သဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖန်တီးမှုလို့ပဲယူဆထားကြတယ်။ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်တော့ ဒီအရာဟာ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ခြေရာလက်ရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်ရင်တော့ အာဖရိကကိုသွားလည်လိုက်။Swaziland နယ်စပ်နားက Mpaluzi ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးအနီးမှာရှိတယ်။ဒီခြေရာကြီးကိုတော့ ၁၉၂၁ ခုနှစ်က အမဲလိုက်သမား Stoffel Coetzee ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၆. Voynich Manuscript
၂၀ ရာစုအတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီ Voynich Manuscript ဆန်းကြယ်လွန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူမှမမဖတ်နိုင်လို့ပဲ။၁၉၁၂ ခနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ စာမျက်နှာပေါင်း ၂၅၀ ပါဝင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးကိုယ်လုံးကျွတ်ပုံစံတွေ ဆေးပင်တွေနဲ့ ရာသီခွင်သင်္ကေတတွေပါဝင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ ဒီစာအုပ်ကို ရေး တက္ကသိုလ်က စာကြည်တိုက်မှာထားရှိပြီးတော့ စာအုပ်ရဲ့သက်တမ်းဟာနှစ် ၆၀၀ လောက်ရှိပြီလို့ယူဆရပါတယ်။ဥရောပအလယ်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေတခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ အချစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လို့ယူဆရပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို အခုချိန်ထိ ကုတ်ဖြည်နိုင်တဲ့သူတော့မတွေ့သေးပါဘူး။ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်တော့ စာအုပ်ထဲက ပုံသဏ္ဍာန် ၁၄ ခုကို ဖြည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခြားအရာတွေကိုတော့ အတိအကျမသိနိုင်သေးပါဘူး။
၇. The Acámbaro Figures
၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာရှာတွေ့ခဲတဲ့အရုပ်လေးတွေပေါ့။ဒီအရုပ်လေးတွေကို မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Acámbaror မှာ WalderMar Julsrud ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်က မြင်းစီးထွက်ရင်းတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေပိုင်ရှင်လယ်သမားကြီးနဲ့အတူတူးဖော်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အရုပ်ပေါင်း ၃၂၀၀၀ လောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ဒီအရုပ်လေးတွေထဲမှာတော့ ဂေါ်ဇီလာရုပ်တွေအပြင် ကမ္ဘာပေါ်ကလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့အရုပ်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အချက်က အဲ့ဒီအချိန်ကလူတွေက ဂေါ်ဇီလာတွေအကြောင်းမသိခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ချက်က မသေမသပ်ထုလုပ်ထားတဲ့အရုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။ပထမတော့ ဒီအရုပ်တွေဟာ ဘီစီ ၂၅၀၀ လောက်ကလို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၅၀၀ လောက် ဆိုတာကို Don Patton ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ကသက်သေပြသွားတယ်။ဒီတော့ ဒီအရုပ်တွေကို ဘယ်သူကထုလုပ်ခဲ့တာလဲ….။